Myanpwel ရဲ့ Facebook Messenger Bot ကို အသုံးပြုပြီး ပွဲလက်မှတ်တွေကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီ - YOYARLAY Digital Media and News
Myanpwel.com ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ပထမဆုံး online ticket နဲ့ ပွဲလမ်းညွှန် Website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ပွဲတွေကို လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တာကြောင့် Myanpwel တွင်ဖော်ပြထားတဲ့ ပွဲတွေကို စနစ်တကျ အမျိုးအစားခွဲပေးထားပါတယ်။ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေ၊ နိုင်ငံတကာ Festival ပွဲတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အားကစားပွဲတွေ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ဆိုင်တဲ့ပွဲတွေကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပွဲအချက်အလက်တွေ၊ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်မှုတွေနဲ့ ပွဲလက်မှတ်အကြောင်းအရာတွေကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် Myanpwel မှ လက်မှတ်ဝယ်ယူသူတွေ ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး Messenger Bot ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Messenger Bot တွင် ဝန်ဆောင်မှု (၃) မျိုးကို ဘာသာစကား (၂) မျိုးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ၁. ပွဲအချက်အလက်တွေကို Myanpwel Admin Team ကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းစုံးစမ်းနိုင်ခြင်း၊ ၂ .မိမိကိုယ်တိုင် ပွဲတွေကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ ၃. ပွဲလက်မှတ်တွေကို အလွယ်တကူတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း စတဲ့ဝန်ဆောင်မှုသုံးမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်မှတ် ဝယ်ယူရာမှာ Sign in with facebook (ဖေ့ဘုတ်ဖြင့်ဝင်ရောက်မည်) (သို့) Continue without account ( အကောင့်မရှိလည်းဝင်ရောက်နိုင်မည် ) ကိုရွေးချယ်ပြီး ပွဲလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ငွေပေးချေမှုမှာ Visa Card, MPU Card, နီးစပ်ရာ ABC နှင့် G&G ဆိုင်တွေကနေ ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း၊ OK$ Dollar , ONGO, WAVE MONEY စတဲ့ Online ငွေပေးချေမှုတွေနဲ့သာမက အိမ်အရောက် ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့လည်း အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Online ငွေပေးချေမှုနဲ့ ဝယ်ယူတဲ့ လက်မှတ်တွေကို E-ticket system နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ Email box (သို့) Messenger မှာသာ မိမိတို့ရဲ့လက်မှတ်တွေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့် လက်မှတ် ပျက်စီးမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ အခြားမြို့တွေက ပွဲတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီလေ့လာသိရှိလိုပါက Myanpwel.com တွင်လေ့လာနိုင်ပြီး မိမိတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာလည်း Myanpwel app ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရယူနိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
Previous Previous post: အန်တိုနီယာ၏ မွေးရပ်မြေ ကယားပြည်နယ်ရဲ့အလှအပများ
Next Next post: ဝက်ခြံပေါက်နေတဲ့နေရာတွေက အမွေးအမှင်တွေကိုဘယ်လို ရိတ်ကြမလဲ